Simplestream သည်မျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအထိရောက်ဆုံးသောလမ်းကြောင်းပြသနိုင်ကြောင်း AfricaCom ကပြောကြားခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Simplestream သည်မျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းပြသနိုင်ကြောင်း AfricaCom မှမြင်တွေ့ရ
Simplestream သည်မျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းပြသနိုင်ကြောင်း AfricaCom မှမြင်တွေ့ရ
Simplestream ၏နိမ့်ကျသော CAPEX နှင့် OPEX ဖြေရှင်းချက်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်ခြင်းမှအလားအလာရှိသည်
6th နိုဝင်ဘာလ 2019 - လန်ဒန် - Simplestreamတိုက်ရိုက်၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ -2-VOD နှင့် OTT ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည် AfricaCom (Cape Town, 12 - 14 နို ၀ င်ဘာ၊ 2019) ကိုတွေ့လိမ့်မည် မိတ်ဆက်၏ Ing အိုင်စီတီ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော App Platform၊ အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးအဆုံးမှအဆုံးသို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအာဖရိက၏တယ်လီကွန်း၊ အသံလွှင့်သူများနှင့်ပါဝင်သူများပိုင်ရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထုတ်လွှင့်သူများ၊ အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည် CAPEX နှင့် OPEX နှင့်အတူဆန်းသစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး၊ ဒန် Finch, Simplestream ဦးစီးချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အရာရှိချုပ်.
အာဖရိကတိုက်ရှိအော်ပရေတာများသည်ပြီးခဲ့သည့်2သို့မဟုတ်3နှစ်များအတွင်းဤချဉ်းကပ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ် AfricaCom တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရ App Platform နှင့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းမှုများသည်ဒေသတွင်းအော်ပရေတာများနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကိုနောက်မျိုးဆက်သစ်မိုဘိုင်းဗဟိုပြုဗွီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြန်ဆန်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်အောင်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြသမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်” ဟုနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည် Finch.
App Platform သည်ဆုရရှိသည့် Simplestream Media Manager CMS အတွင်း multi-channel live simulcasting၊ live-event streaming၊ catch-up, VOD, EPG display, cloud DVR, security, CDN switching ပါ ၀ င်သောအဖြူရောင်တံဆိပ် OTT solution ကို configure လုပ်ထားသည်။ နှင့် configuration များနှင့်လုံခြုံ downloads ။ Simplestream မှပံ့ပိုးပေးသည့်ဖြေရှင်းချက်တွင်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံလျှောက်လွှာမူဘောင်၊ OTT လုပ်ငန်းအသွားအလာ၊ အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ငွေတောင်းခံမှု၊
App Platform ၏တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များ -
ကိရိယာများစွာမှ 100 လိုင်းများကိုထောက်ပံ့သည်
အလိုအလျောက် 30 နေ့ကဖန်တီးမှုကိုအမီလိုက်သည်
ပေါင်းစပ်ထားသောအမေရိကန်စတူဒီယိုမှအတည်ပြုထားသော DRM နှင့်အတူရုပ်ရှင်နှင့်သေတ္တာများတပ်ဆင်ခြင်း
ကိရိယာအင်္ဂါရပ်ကို Download လုပ်ပါ
Simplestream သည်ခေတ်မှီဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပေးထားသည်။ AVOD, SVOD, TVOD၊ App ဝယ်ယူမှုနှင့်အော်ပရေတာတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခြင်းတို့အတွက်ပါ။
MediaKind နှင့်ပူးပေါင်းသူများသည် Chattanooga ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုထူးခြားသောအနုပညာကိုအာရုံစိုက်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ပွဲဖြင့်ပံ့ပိုးသည် - မေလ 19, 2020
LTN ဂလိုဘယ်သည် Amazon Web Services Partner Network တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာပါတနာဟုအမည်ပေးခဲ့သည် - မေလ 14, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 TVU ကွန်ယက် virtual reality 2019-11-06
ယခင်: NEP ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနောက်ဆုံးသတင်းများ Core Truck Technology ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ